Tondradrano be ao Indônezia, mihoatra ny 30.000 ny olona tao amin’ny faritr’i Sumatra no nafindra toerana · Global Voices teny Malagasy
Vao mainka nanaratsy ny toedraharaha ny rotsakorana nitohy hatramin'ny 31 Desambra
Voadika ny 13 Janoary 2022 9:43 GMT
Sary avy eny an'habakabaka mampiseho ireo tondradrano tao Aceh tamin'ny herinandro lasa, taorian'ireo andro nisian'ny orambe nivatravatra. Tao amin'ny YouTube.
Herinandro iray taorian'ny orambe namely ny nosy Sumatra ao Indônezia, mihoatra ny 32.000 ireo olona nafindra toerana, ary zaza telo no maty. Olona marobe manerana ny faritra no tsy hita popoka. Ny 31 Desambra 2021, nisy orambe nivatravatra tao amin'ilay nosy, niteraka fiakaran'ny rano tampoka tany amina distrika efatra. Nanomboka teo, niaina tanaty rano noho ny orana tsy nitsahatra ny sasany tamin'ireo any amin'ny faritra avaratry ny nosy Sumatra.
Eo amin'ny sary: Orambe nivatravatra niteraka tondradrano tao Aceh Avaratr'i Indônezia pic.twitter.com/9eIHugdLOh
Tany amin'ireo maoske, toby vonjimaika ho fialofana, ary ireo tranom-panjakana no napetraka ireo mponina avy amin'ireo faritra tena voa mafy, satria mihoatra ny 11.000 ireo trano no difotra.
Tany amin'ny faritra sasany, efa nanomboka nitsika ny rano, saingy faritra maro no mbola tondraka, mahatonga ireny faritra ireny ho sarotra itsofohana ary manelingelina ny ezaka fanavotana sy fanampiana. Namoaka filazana ‘hamehana’ ireo manampahefana ao Aceh Avaratra hatramin'ny 15 Janoary teo.
Asehon'ity sary avy eny an'habakabaka ity ireo tranobe difotry ny rano, izay ahitàna maoske (C) iray nandritra ny tondradrano tao Lhoksukon, Aceh Avaratra ny 4 Janoary 2022. #Flood #Indonesia #NaturalDisaster #BisheshNews
(Sary an'i ZIKRI MAULANA / AFP) pic.twitter.com/EWOEsj7SHa
Raha ny famonjena ny naratra sy niharan-doza tamin'ireo tondradrano no voalohany nimasoan'ireo manampahefana, ny hafa kosa miasa loha amin'izay mety mbola ho tohiny.
Muhammad Hatta, mipetraka amina vohitra kely iray tsy lavitra ny tanànan'i Lhoksukon ao amin'ny faritanin'i Aceh, nilaza tamin'ny AlJazeera fa izy manokana dia miasa loha momba ireo sakelika maron'ny toekarena, tamin'ny fanamarihana hoe, “Potika ny toekarena anatiny.” Nanampy izy hoe:
Mampiasa saina kokoa anay ny hoe inona no hitranga rehefa misintona ny rano. Difotry ny rano daholo ny tanimbary aty amin'ny faritra. Efa nivonona ny hijinja azy ireny indrindra ireo mpamboly, nefa amin'ny ankapobeny ny vokatra dia maty aorian'ny andro telo na efatra ilonany tanteraka anaty rano. Tena tsy misy horaisina tanteraka ireo mpamboly.
Ireo manampahaizana manokana momba ny fahasalamana miahiahy ihany koa hoe mety vao mainka hanaratsy ny olana ara-pahasalamana ilay tondradrano ary hiteraka fiakaran'ny isan'ny tratry ny COVID-19, izay zavatra voafehin'ny faritr'i Aceh tsara mihitsy nandritra ny fotoana tena nampanjaka ilay valanaretina, zara raha nisy 38.000 ireo tranga voatatitra hatramin'ny Martsa 2020, araka ny fanisàna ôfisialy.
Dr. Indra Buana, manampahaizana manokana momba ny aretin-tratra, mipetraka ao Lhoksukon, nilaza tamin'ny AlJazeera hoe “nihena ny isan'ireo voan'ny COVID-19 tao Aceh Avaratra ary vitsy ireo marary tonga nanatona ahy no nahitana soritr'aretina henjana tato anatin'ny herinandro vitsivitsy.”
Na izany aza, na efa tafangona any amin'ireo fialofana vonjimaika sy maoske aza ireo mponina, Buana kosa mbola manahy ny mety hiparitahan'ilay viriosy. Aceh dia iray amin'ireo faritra ao Indônezia mbola vitsy ny vita vaksiny, hatramin'ny 2 Janoary teo dia 22 isanjato monja amin'ny vahoakany no efa vita vaksiny in-droa hanoherana ny COVID-19: “Atahoranay ny mety hitomboan'ny isan'ny tranga COVID-19. Mety tena hampididoza raha misy olona avy any ivelan'ny faritra ka misy otrikaretina COVID-19 nefa tonga mitsidika ireo toerana fialofana ary hamindra tsy nahy amin'ny rehetra.”
Ankoatra ny COVID, ny tondradrano dia mitondra miaraka aminy ireo olana sy ambana ara-pahasalamana mifamatotra aminy. Ny fisotroana rano tondraka sy voaloto dia mety hitarika amina olan'ny havokavoka, ary ny toetrandro mando sy ny hamandoana lava dia mety hanasarotra ny aretina sohika na hitondra ho amin'ny fahavoazan'ny faritra ambony amin'ny taova fisefoana.
Raha efa fahita isantaona mandritra ny fahavaratra ao Indôniezia (manodidina ny Novambra hatramin'ny Martsa isantaona) ny tondradrano, dia oram-batravatra tsy mahazatra kosa no natrehin'ny firenena nanomboka tamin'ny Novambra 2021, nanampy tamin'izany ny La Niña. Isaky ny taona vitsivitsy no misy io tranga ara-toetrandro io, izay midika hoe “zazavavy kely” aminy fiteny espaniôla, miteraka fiakaran'ny maripanan'ny rano any amin'ny Ranomasimbe Pasifika raha oharina amin'ny mahazatra, sy fiantraikany amin'ireo fepetra mandrafitra ny toetrandro manerana izao tontolo izao. Ao Indônezia sy Pasifika, ny vokatr'io dia orambe sy rivodoza, izay mety hitondra amina fihotsahan'ny tany, tondradrano, ranom-potaka mandrevo, sy ny maro hafa.
Distrika 14 raha kely no tratry ny tondradrano tao amin'ny faritanin'i Aceh, Indonezia. Sary tao amin'ny Twitter, an'i @theguzel_
Tamin'ny Oktôbra 2021, Dwikorita Karnawati, lehiben'ny Meteorology, Climatology, and Geophysical Agency (BMKG), masoivoho nasiônaly ao Indônezia misahana ny fandraisana an-tànana ireo loza voajanahary, dia nampitandrina fa nivoatra ny tranga La Niña ary nanainga ireo distrika mba hiomana amin'ny hisian'ireo tranga henjana ara-toetrandro, tamin'ny filazàna fa “Asehon'ireo rakitahiry ara-tantara fa ny La Niña tamin'ny 2020 dia niteraka fiakaran'ny rotsakorana isambolana tao Indônezia, 20 hatramin'ny 70 isanjato noho ny mahazatra.”
Saingy tsy azo ahilika fotsiny ho noho ny La Niña ireo tondradrano. Ambaran'ireo mpahay tontolo iainana fa ny olana ara-toetrandro sy ny famotehana ala dia mandray anjara ihany koa amin'ny fisian'ireo tranga ara-toetrandro faran'izay henjana. Ny ONG indôneziàna mpiaro tontolo iainana, Wahli, nilaza tamin'ny Jakarta Post fa faran'izay ratsy ny faharavàna satria betsaka tamin'ireo ala tao Sumatra no nofongorina nosoloina fambolena voanio fanao menaka. Rehefa tsy misy hazo sy kirihitra mba hiasa ho toy ny sakana voajanahary, dia ho lasa mamono mahafaty kokoa sy mandrava kokoa ireo tondradrano tampoka.
Ananda Justisiani, mpitondrateny avy amin'ny ekipa mpanao vonjitaitran'ny Aksi Cepat Tanggap ao Aceh, nilaza tamin'ny Arab News fa:
Tamin'ity indray mitoraka ity, tena nahavoa faritra midadasika kokoa ireo tondradrano. Tena ratsy be ny toedraharaha satria mihoatra ny morony ireo renirano ary be kokoa ny orana. Araka izany dia tsy mihena ny haavon'ny rano.
Ny Ministry ny Raharaha Sôsialy (Mensos), Tri Rismaharini (Risma), nitsidika ireo niharam-boina tamin'ny Alatsinainy 3 Janoary, ary nanampy nitatittra sy nitsinjara fanampiana. Maro tamin'ireo niharam-boina no nangataka tamin'ny governemanta mba hanorina indray ny tranon-dry zareo izay rava, ka novalian'i Risma tanaty fanambaràna an-tsoratra hoe, “Amporisihany ny governemanta eo an-toerana mba hijery avy hatrany ireo fangatahan'ny mponina.” Vinavinain'i Risma ihany koa ny haka hevitra amin'ireo manampahaizana manokana mba hamaritana raha azo antoka na tsia ny toerana teo aloha nisy ireo trano fonenana, na tokony hafindra.
Ho fanampiana hiadiana amin'ny tondradrano amin'ny hoavy, natsangan'ny governemanta ny Tohodrano Keureuto, izay hanakana ny renirano Krueng Keureuto sy ny sasany amin'ireo sakelika mankao aminy. Heverina hifarana tanteraka amin'ny 2023 ary mety hampihena ny tohodrano isantaona.
Tsy i Sumatra irery akory no nosy miatrika fahasarotana aterak'ireo tranga ara-toetrandro faran'izay henjana tamin'ity taona ity. Ny ampahany amin'i Java sy Papua koa dia tondraka tamin'io herinandro io.